Ku laabashada iqtiyaarka ah marka codsigaaga magangalyada la diido - Migrationsverket
/ Ku laabashada iqtiyaarka ah marka codsigaaga magangalyada la diido
Ku laabashada iqtiyaarka ah waxay la micno tahay in aad ogolaatay go'aanka ah in aan laguu ogoleyn in aad sii joogtid Sweden iyo aad kala shaqeyneysid ku laabashada wadankaaga asalka ah.
Marka aad heshid go'aanka khuseya diidmada gelitaanka ama ka saarida, waxaa laguugu caawayaa kulan aad la geleysid sarkaalka dacwada si aad uga hadashaan noqoshadaada. Inta lagu jiro kulanka, waxaa lagu siinayaa macluumaad ku saabsan kala duwanaanshaha badelada laga heli karo dacwadaada iyo waxaa sidoo kale laga yaabaa in aad weydiiso su'aalo walba ee aad qabtid.
Haddii aysan kuu suurtogaleynin in aad diyaarisiid safarkaaga, adiga iyo sarkaalka dacwada waxay sameyneysaan qorshe sharaxaya waxa aad sameyn doontid iyo waxa Wakaalada Socdaalka aad sameyneysin. Tusaale ahaan, waxaad la xiriiri kartaa safaaradaada si markaas loo helo baasaboor, marka ay Wakaalada Socdaalka ay kugu caawin karto fiisooyinka dal lagu sii dhex maro haddii ay tahay in aad meelo ku sii hakanaysid oo aad badeshid diyaaradaha inta lagu jiro safarkaaga laabashada.
Ku laabashada labba ama afar todobaad
Haddii aad heshay amarka mastaafurinta, waa in kaga tagtaa wadanka afar todobaad gudaheeda oo ka bilaabaneyso taariiqda go'aanka dhaqan galo. Haddii aad heshid go'aanka diidmada gelitaanka, waa in aad kaga tagtaa wadanka labba todobaad gudahooda oo ka bilaaneyso taariikhda go'aanka dhaqangalo, illaa haddii kale lagu sheego go'aanka.
Go'aanka wuxuu dhaqangalaa saddex todobaad kadib markaad heshid iyada, haddii aadan ka racfaan qaadan go'aanka ka hor markaa.
Haddii aadan uga tagin Sweden gudaha muddada waqtiga lagu caddeeyay go'aanka, waxaa si caadi ah laguugu soo saarayaa mamnuucida dib u gelida oo daboolaysa wadamada Schengen, sidoo kale sida Romania, Bulgaria, iyo Croatia. Mamnuucida dib ugelida waxay ansax hal sanno.
Aqri wax badan oo ku saabsan mamnuuca dib u gelida iyo sida aad uga fogaan kartid in hal laguu sameeyo
Haddii aad heshay go'aanka diidmada gelitaanka oo degdeg u dhaqan galaya, waa in aad kaga tagtaa Sweden sida ugu dhaqsiha badan markaad heshid go'aanka. Waxaad kaga racfaan qaadan kartaa go'aanka saddex todobaad gudahooda markaad hesho amarka, laakiin ma joogi kartid Sweden adiga oo aad sugeysid in maxkamadda ay tixgeliso racfaankaaga.
Haddii aad heshid amarka diidmada ee degdega u dhaqan galaya, waxaad si caadi ah loogu soo rogoyaa mamnuucida dib u gelida xitaa haddii aad uga tagtid Sweden si degdega ah. Tani micnaheeda waa haddii aad heshid amarka diidmada ee gelitaanka degdeg u dhaqan galaya ma geli kartid wadan walba oo Aaga Schengen, sidoo kale sida Romania, Bulgaria, iyo Croatia, ugu yaraan labba sanno.
Ku laabashada wadanka aan ka aheyn wadankaaga asalka ah
Wadan kale ee ku yaala Midowga Yurub
Wakaalada Socdaalka laga yaabo in ay go'aansato in aad ku laabatid Wadan kale oo Xubin ka ah EU iyo in codsigaaga magangalyada halkaas laga tixgeliyo. Tani waxay tusaale u noqon kartaa sababta adiga aad u joogtay Wadan kale ee Xubinta ka ah EU ka hor imaanshaha Sweden, ama in lagaa siiyo fiiso ama aad codsatid magangalyada Wadan kale ee Xubinta ka ah EU. Sharciyadaan waxaa laga heli karaa Sharciga Dublin.
Haddii badelkeeda aad rabtid in aad ku laabatid wadankaaga asalka ah, tani waa la ansixin karaa haddii aysan ku keeneynin daahitaan noqoshadaada amaaanay si wayn u qaali u aheyn.
Akhri wax badan oo ku saabsan Sharciga Dublin iyo sababta aadan u dooran karin wadanka halka codsigaaga magangalyada lagu baaray
Wadan kale aan ka aheyn midka lagu sheegay go'aanka
Waa in aad ku laabataa wadanka lagu sheegay go'aanka ee diidmada gelida ama ka mastaafurinta. Tani inta badan wadanka halka aad ka tahay muwaadin.
Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waad ku laaban kartaa wadanka aan ka aheyn midka lagu sheegay go'aanka haddii aad muujin kartid in halkaas lagaa ogolaanayo. Xaaladaan, waxaad u baahaneysaa baasaboor sax ah iyo oggolaanshaha deganaanshaha ee wadankan. Fiisada dalxiiska ama ka dhaafida fiisada kuma filna. Tanlama oggolaan doono haddii ay la micno tahay in ku laabashadaada daahdo ama ay si weyn qaali u tahay.
Adiga ayaa masuul ka ah helida waraaqaha safarka
Waa masuuliyadaada in aad hesho baasaboor ama waraaqaha safarka ku meelgaarka ah si aad u laabatid muddada waqtiga saxda ah.
Haddii aad caawin u baahantahay, Wakaalada Socdaalka waxay la xiriiri kartaa masuulada wadankaaga asalka ah oo ka codso baasaboor adiga ah. Xaaladan Wakaalada Socdaalka waa inay siisaa macluumaadka gaarka ah masuulada wadankaaga asalka ah, laakiin ma muujinayo in aad ka codsatay magangalyo Sweden.
Haddii aysan jirin hab kale oo lagu helayo baasaboor laga yaabo in aad, in dacwadaha gaarka ah, laguu soo saaro baasaboor soo geleeti kumeel gaar ah oo ka imaanaya Wakaalada Socdaalka. Xaaladaan baasaboorkasoo geleetiga ah ee kumeel gaarka ah waxaa kaliya uu ansax yahay laabashadaada ee wadanka asalka ah.
Adiga ayaa masuul ka ah in aad iska bixisid safarkaaga laabashada. Haddii adiga aadan awoodin in aad sidaas sameysid Hay'ada Socdaalka laga yaabo in ay diyaariso iyo kaa bixiso tikidka.
Waad ka laaban kartaa codsigaaga
Waad ka laaban kartaa codsigaaga magangalyada, oo ugu laabatid wadanka si iqtiyaar ah xitaa ka hor inta codsigaaga magangalyada aan la habbayn. Waxaad sidoo kale heli kartaa caawimada diyaarinta laabashadaada safarka haddii aad la xiriirtid sarkaalka dacwadaada ee qeybta soo dhaweynta halka aad ka diiwaangashantahay.
Taageerada ku laabashada
Kala hadal sarkaalkaaga soo dhaweynta nooca taageerada aad ugu baahantahay laabashadaada. Waad awoodaa, tusaale ahaan, caawimo ka helida adoo la xidhiidhata ururadda Sweden kaas oo bixin kara macluumaadka ku saabsan xaalada wadankaaga asalka ah ama tallo ku siisaa iyo taageerada safarka laabashada, ama ka caawisaa la xidhiidhka ururada wadankaaga asalka ah oo lagu helayo taageero marka aad ku laabatid.
Haddii aad si iqtiyaar ah ugu laabatid waxaa laga yaabaa, dacwadaha qaarkood inaad, codsatid taageerada dib u aasaasida.
Akhri wax badan oo ku saabsan qofka codsan karo taageerada dib aasaasida iyo waxa taageerada ku lug leedahay